Antananarivo Renivohitra Hosaziana izay mivoaka ny trano tsy manao arovava
Asa tsy maintsy hataon’ny isan-tokantrano amin’izao, indrindra fa ny Renim-pianakaviana ny namboatra arovava manara-penitra ho an’ny ankohonany.
Kaominina maromaro mantsy tamin’ity herinandro ity no efa nandray fepetra fa tsy mahazo mivoaka ny trano intsony izay rehetra tsy manao arovava ho fiarovana amin’ny fiparitahan’ny tsimok’aretina coronavirus. Ho an’ny kaominina Antananarivo renivohitra manokana dia nanamafy izany ny prefektioran’ny polisy eto Antananarivo fa tsy maintsy manao tampim-bava avokoa izay rehetra mivoaka ny trano. Hotazomin’ny mpitandro ny filaminana mandritra ny 30 minitra avokoa araka izany ireo olona tratra tsy manao izany kanefa mivezivezy eny rehetra eny. Ho an’ireo izay tsy manana kosa dia nanamafy ny jeneraly Angelo Ravelonarivo, prefen’Antananarivo fa tsy maintsy manakona ny tarehy amin’ny « cache-nez » izy ireny farafaharatsiny na lambakely rehefa hivoaka ny trano.